Kooxda Chelsea oo kula dagaalameysa Man United, saxiixa xidiga ay dooneyso inay badalka kaga dhigato Hazard – Gool FM
Kooxda Chelsea oo kula dagaalameysa Man United, saxiixa xidiga ay dooneyso inay badalka kaga dhigato Hazard
Dajiye March 31, 2019
(England) 31 Maarso 2019.Chelsea ayaa qeyb kala soo noqotay Manchester United tartanka loogu jiro saxiixa xidiga reer Brazil ee kooxda Barcelona Philippe Coutinho kadib marka uu fuurmo suuqa xagaaga ee soo aadan, sida ay ku warameyso jariidada The Sun.
Sida laga soo xigtay wargeyskan caanka ah, kooxda ka dhisan galbeedka magaalada London ee Chelsea ayaa ku soo biirtay loolanka loogu jiro saxiixa Philippe Coutinho, kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya inuu qirtay inuu doonayo ka tagista safka Barcelona.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Brazil Philippe Coutinho oo 26 sano jir ah, ayaa qeyb ka soo noqday xidigha ay kooxda Chelsea xiiseeneyso saxiixooda suuqa xagaaga ee soo aadan, si uu ugu noqdo badalka Eden Hazard, kaasoo ku dhow inuu u dhaqaaqo Real Madrid suuqa xagaaga ee soo aadan.
Dhawaan ayay ahayd kadib markii uu sheegay wargeyska “Sport” in Philippe Coutinho uu ku wargaliyay saaxiibadiis xulka qaranka Brazil suurtagalnimada uu kaga dhaqaaqi karo kooxda Barcelona.
“Waxaan doonayaa inaan ka dhaqaaqo kooxda Barcelona, waan ogahay inuu yahay go’aan aad u adag, balse waxaa suuragal ah inay u wanaagsan tahay xirfadeyda ciyaareed ee kubadda cagta”.
Dhinaca kale waxaa xusid mudan in Manchester United ay tahay kooxda sida xoogan u xiiseeneyso saxiixa Philippe Coutinho, balse waxay tartan adag kala kulmi doonaan dhigooda ay sida aadk ah ugu dagaalamaan kubadda cagta dalka England ee Chelsea.
Zidane oo si RASMI ah ugu dhawaaqay Liiska xiddigaha Real Madrid ee ka`ga qeyb galay kulanka Huesca & TODOBO xidig muhiim ah ee aan ku soo bixin
Barcelona oo dooneysa inay iibiso mid ka mid ah xidigaha uu ugu jecelyahay Ernesto Valverde